Radio Don Bosco - Foibe FAFIALA : nanaparitaka haitaom-pamokarana
Foibe niantsehatra amin'ny sehatr'asa fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny fiarovana ny tontolo iainana ny FAFIALA. Manofana ireo tantsaha, teknisiana sy ny fikambanana samihafa momba ny asa fampandrosoana eny ambanivohitra nanomboka tamin'ny taona 1992, izay hanamarika ny faha-30 taona nijoroana amin'ny taona 2022.
Iray amin'ireo foibe niisa 5 tamin'izany fotoana izany natsangana noho ny fiaraha-miasa suisse, hany sisa mijoro amin'izao fotoana izao. Mivoatra manaraka ny fotoana ihany koa anefa ny rafitry ny FAFIALA hoy Andriamatoa Raveloarijaonina Nonah, tale mpanatanteraka.
Foibe miantsehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra mifototra amin'ny fampandrosoana lovain-jafy ny FAFIALA. Misandrahaka amin'ny faritra samihafa ny sehatr'asany ankehitriny. Ny any avaratra, ny any atsimo, ny any andrefana sy atsinanana ary ny asty afovoan-tany. Mivoy ny teknika famokarana nohatsaraina ahafahana miatrika ny fiovaovan'ny toe-tany, mivohy ny fambolena miaro ny tontolo manodidina, miaro ny tontolo iainana sy mikajy ny zava-boary hoy ny tale mpanatanteraka, Raveloarijaonina Nonah.
Andraikitra goavana nankinin'ny Fanjakàna amin'ny FAFIALA ihany koa ny fihazonana sy ny fanatsaràna ny taranaky ny landy eto Madagasikara, toa izany koa ny fampiroboroboana ny karazana voarohihazo, sakafon-dandy. Sehatr'asa tanterahany ao Tsivatrinikamo-Antsirabe.